Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara permafrost | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Mgbanwe ihu igwe
N’ezie ị nụtụrụla permafrost. Ọ bụ akwa nke okpuru ala nke ahụ bụ nke ụwa ma bụrụ nke na-ajụ oyi mgbe nile n’ihi ọdịdị ya na ihu igwe ebe a hụrụ ya. Aha ya sitere na ifriizi a na-adịgide adịgide. Ọ bụ ezie na oyi akwa a dị n’ime ala na-eme ka ọ dịgide kpamkpam, ọ naghị ekpuchi ya na ice ma ọ bụ snow mgbe niile. A hụrụ ya na mpaghara nwere ezigbo oyi na periglacial.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, nhazi na nsonazụ nsonaazụ nke agbaze permafrost.
2 Kedu ihe kpatara ịmịkọrọ nke permafrost ji dị egwu?
3 Ihe na-esi na agbaze permafrost
Permafrost nwere afọ ala na mgbakwunye na puku afọ iri na ise. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na mgbanwe ihu igwe na-amụba okpomọkụ zuru ụwa ọnụ, ụdị ala a nọ n'ihe ize ndụ nke ịgbaze. Na-aga n'ihu thawing nke a permafrost nwere ike ime ka dị iche iche na ya pụta na anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị na isiokwu a. Ọ bụ otu ihe egwu kachasị njọ anyị hụrụ na mgbanwe mgbanwe ihu igwe n'afọ iri a.
E kewara permafrost ụzọ abụọ. N'otu aka ahụAnyị nwere pergelisol. Nke a bụ ihe kachasị mie emi nke ala a ma oyi jụọ oyi. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị nwere molisol. Molisole bụ akwa kachasị elu ma nwee ike ịdị mfe karị na ngbanwe nke okpomọkụ ma ọ bụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi ugbu a.
Anyi agaghi emegharia permafrost na ice. Ọ pụtaghị na ọ bụ ala ekpuchitere, kama na ọ bụ ala oyi kpọnwụrụ. Ala a nwere ike ịbụ ezigbo ogbenye na nkume na ájá ma ọ bụ bara ọgaranya na ihe ndị dị ndụ. Nke ahụ bụ, ala a nwere ike ịnwe nnukwu mmiri oyi ma ọ bụ ọ nwere ike ịnwe ihe enweghị mmiri mmiri.
A na - ahụ ya n’ime ala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa dum na mpaghara oyi. Kpọmkwem Anyị na-ahụ ya na Siberia, Norway, Tibet, Canada, Alaska na agwaetiti ndị dị na South Atlantic Ocean. Naanị nke a bi n'etiti 20 na 24% nke elu ụwa ma pere mpe karịa nke ọzara. Otu njiri mara nke ala a bụ na ndụ nwere ike itolite na ya. N'okwu a, anyị hụrụ na tundra amalite na ala permafrost.
Kedu ihe kpatara ịmịkọrọ nke permafrost ji dị egwu?
Ikwesiri ima nke a ruo otutu puku oge permafrost abụwo ọrụ maka ịba ụba nke carbon carbon. Dịka anyị siri mara, mgbe ihe dị ndụ nwụrụ, ahụ ya na-erekasị n’ime ihe ndị sitere n’ahụ. Ala a na-amịkọrọ ahịhịa nwere ọtụtụ carbon n'ime ya. Nke a pụtara na permafrost enwewo ike ịgbakọta gburugburu ijeri metric tọn 1.85 trillion nke carbon.
Mgbe anyi huru na permafrost bidoro gbazee nsogbu di uku diri ya. Usoro ịgbaze a na-agbaze na-egosi na a na-ewepụta carbon niile nke ala ahụ na-ejide n'ụdị nke methane na carbon dioxide na mbara igwe. N ịgbaze a na-eme ka ikuku gas na-ebili na mbara igwe. Anyị na-echeta na carbon dioxide na methane bụ gas abụọ griin haus nwere ikike ijigide okpomọkụ na ikuku ma na-ebute mmụba na nkezi okpomọkụ ụwa.
Enwere ọmụmụ ihe bara ezigbo uru nke na-ahụ maka ịdekọ mmụba na okpomọkụ dị ka ọrụ nke mgbanwe na mgbatị nke ụdị gas abụọ a na mbara igwe. Isi ihe kpatara omumu a bu nyochaa ihe ngwa ngwa nke agbaze mmiri permafrost. Iji mara mgbanwe a na ọnọdụ okpomọkụ, ndị na-eme nchọpụta ga-egwu ala n'ime ahụ iji wepụta ihe atụ ole na ole iji nwee ike ịdekọ ọnụọgụ carbon dị na ha.
Dabere na ego nke gas ndị a, enwere ike idekọ ọdịiche nke ihu igwe. Site na mmụba dị ukwuu na okpomọkụ, ala ndị a kpọnwụrụ kemgbe ọtụtụ puku afọ amalitela ịgbaze na ọnụego a na-apụghị igbochi. Nke a bụ agbụ inye onwe ya. Nke ahụ bụ, mmiri permafrost na-eme ka ịrị elu nke okpomọkụ nke, n’aka nke ya, ga-eme ka ọbụna karịa permafrost gbazee. Mgbe ahụ rute ebe ọnọdụ ụwa zuru oke ga-arị elu n'ụzọ dị egwu.
Ihe na-esi na agbaze permafrost
Dị ka anyị si mara, mgbanwe ihu igwe na-achịkwa site na mmụba na okpomọkụ zuru ụwa ọnụ. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a nwere ike ibute mgbanwe na usoro ihu igwe ma bute ihe ịtụnanya. Ihe omume dị egwu dịka ogologo oge oke ọkọchị, oke oge idei mmiri, ikuku mmiri, ifufe na ihe ndị ọzọ pụrụ iche.
Na ndị ọkà mmụta sayensị ọ e guzobere na-abawanye na zuru ụwa ọnụ nkezi okpomọkụ nke 2 Celsius Celsius ga-ebute ọnwụ nke 40% nke elu dum nke permafrost bi. Ebe ọ bụ na ịkụcha ala a na-akpata ọnwụ nke ihe owuwu ahụ, ọ na-adị oke njọ ebe ọ bụ na ala ahụ na-akwado ihe niile dị n'elu na maka ndụ. Ọnwụ ala a pụtara na ihe niile dị n’elu ya ga-efunahụ ya. Nke a na-emetụtakwa ihe ndị mmadụ wuru na oke ọhịa n'onwe ha na usoro okike niile metụtara ya.
Permafrost dị n'ebe ndịda Alaska na ndịda Siberia na-agbaze ugbua. Nke a na - eme ka akụkụ a niile dịkwuo mfe. E nwere akụkụ nke permafrost ndị na-ajụ oyi ma kwụsie ike karị na ugwu ndị dị elu nke Alaska na Siberia. A na-echekwa ebe ndị a n'ụzọ ka mma karịa ka mgbanwe ihu igwe dị oke mma. A tụrụ anya mgbanwe siri ike na afọ 200 sochirinụ, ma ka ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu ha na-ahụ ibe ha tupu oge eruo.
Igwe na-arị elu site na ikuku Arctic na-eme ka permafrost gbazee ngwa ngwa na ihe niile na-emepụta ihe na-emebi ma hapụ carbon ya niile n'ime ikuku n'ụdị ikuku griinụ.
Enwere m olileanya na ozi a nwere ike ịmụtakwu banyere permafrost na nsonaazụ nke agbaze ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Permafrost
Oke Osimiri Aral